Muqdisho:Burcad hubaysan oo dhac faraha kula jireyoo la qabtey xaley – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho:Burcad hubaysan oo dhac faraha kula jireyoo la qabtey xaley
5th March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Muqdisho (mareeg)—Israsaaseyn muddo kooban socotay ayaa Xalay Nawaaxiga Carwadii hore ee Taleex ee Degmada Hodan waxey ku dhexmartay Kooxo hubeysan iyo Ciidamada amaanka qaabilsan ee Degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho.
Labada dhinac ayaa iska horimaadkooda yimid kadib markii sida la sheegay Dableey hubeysan oo dhac ka geysanayay Nawaaxiga Carwadii hore ee Taleex ay ku soo baxeen Ciidamada ammaanka ee Degmada Hodan, inkastoo aan la oageyn khasaaraha ka dhashay.
Dhinaca kale, Taliyaha Ciidamada Booliska ee Degmada Hodan, Xussen Sheekh Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay isku dhaceen Kooxo hubeysan oo ku sheegay in ay ahaayeen Burcad oo fal dhac ah ka geysanayay Degmada Hodan.
Taliye Xussen Sheekh Maxamed ayaa waxuu tilmaamay in Ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah Kooxdii dhaca ka waday Nawaaxiga Carwadii hore ee Taleex, islamarkaana ay ku raadjoogaan kuwa kale oo baxsaday.
Ciidamada qaabilsan ammaanka ee Degmada Hodan ayaa maalmahaan dambe waxaa ay gudaha Degmadaasi ka wadeen Howlgallo joogto ah oo sida uu shaaciyay Taliska Booliska Degmada Hodan lagu xaqiijinayay nabad galyada Shacabka ku dhaqan Degmada Hodan
Wasiirka Gaashaandhigga oo kulamo ka wada Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo Mareykanka uga qeyb galay shir muhiim ah